Toroidal transformer: ihe niile ị chọrọ ịma gbasara akụrụngwa a | Akụrụngwa n'efu
Toroidal transformer: ihe niile ịchọrọ ịma
na ndị na-eme mgbanwe (dika toroidal transformer) bu components ọtụtụ-eji ọtụtụ ngwaọrụ. Karịsịa na ndị na-eji DC, ebe ọ bụ na ha na-ekwe ka ịga site na nnukwu voltages nke netwọk eletriki nke ngwaọrụ ndị a jikọtara na voltages dị ala nke ha na-arụkarị (12v, 5v, 3.3v ...) wee gbanwee site na AC na CC-eji nke fọdụrụ nkebi nke a ọkọnọ ike.
Ọ dị mkpa ka ị mara otú o si arụ ọrụ ụdị mgbanwe a na ngwa ha, yana ebe na otu ị ga - esi azụta otu n’ime ha maka ọrụ gị, wdg. A ga - ejikwa ndu a ga - edozi obi abụọ a niile ...
1 Gịnị bụ ihe ntụgharị?
2 Kedu ihe na-agbanwe toroidal?
2.2 Uru na ọghọm ya
3 Ebee ka ịzụta ihe ntụgharị nke toroidal
Gịnị bụ ihe ntụgharị?
Un onye na-agbanwe agbanwe Ọ bụ mmewere nke na-enye ohere ịgafe na voltage dị ugbu a gaa na nke ọzọ. Ọ nwekwara ike ịgbanwe ike ugbu a. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ ga-echekwa akara ngosi na ike ike mgbe niile. Nke ahụ bụ, isofrequency na isopower ...
Nmezu ikpeazụ a anaghị ejide eziokwu, ọ ga-abụ ezigbo onye na-agbanwe ihe omimi, ebe ọ bụ na omume enwere ọghọm n'ụdị okpomọkụ, otu n'ime nsogbu kasịnụ nke ihe ndị a. Ọ bụ ya mere o ji esi na iji ihe na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-eme ka ha dị larịị (akwa nchara silik na mkpuchi n'etiti ha) iji belata mmiri dị egwu ma ọ bụ iyi parasitic.
Iji mezuo nzube ya, ọkụ eletrik na-abanye ntinye ya na-agbanwe magnetism n'ihi winding na metal isi. Mgbe ahụ, ndọta nke na-aga site na isi igwe ga - eme ka ike dị ugbu a ma ọ bụ nke electromagnetic dị na windo nke abụọ iji nye ugbu a na mmepụta ya. N'ezie, waya ikuku nke windings nwere ụdị nke na-egbochi ihe mkpuchi nke mere na, ọ bụ ezie na ha merụrụ ahụ, ha anaghị akpọtụrụ ibe ha.
Thezọ iji nwee ike ịgbanwe site na otu voltaji na nke ọzọ bụ igwu egwu na ọnụọgụ nke ntụgharị ma ọ bụ ntụgharị ọla kọpa na winding na nke mbụ. Dị ka Iwu Lenz, nke ugbu a ga-nwetụ maka mgbanwe mgbanwe a ka ọ pụta, yabụ onye na-agbanwe ọkụ enweghị ike ịrụ ọrụ na ugbu a.
Dịka ị pụrụ ịhụ n'ihe onyonyo dị n'elu, mmekọrịta N'etiti eriri igwe na voltaji na ike dị mfe. Ebe N bụ ọnụọgụ ntụgharị nke winding (P = isi, S = nke abụọ), ebe V bụ voltaji (P = etinyere na isi, S = mmepụta nke abụọ), ma ọ bụ m nhata nke ugbu a ...
por ịmaatụ, Were ya na ị nwere ihe ntụgharị nwere ngbanye 200 na isi yana 100 spirals na sekọndrị. A na-etinye volta ntinye nke 200v na ya. Kedu voltage ga-apụta na mmepụta nke nke abụọ? Dị mfe:
Nke ahụ bụ ịsị, ọ ga-agbanwe ntinye 220v ka ọ bụrụ 110v na nrụpụta ya. Ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke uzo na-nwesịrị na isi na nke abụọ asọfe, agbara ga-eme. Dịka ọmụmaatụ, chee na otu 220v isi voltaji na-etinyere na isi, mana isi nwere 100 ntụgharị na nke abụọ nwere 200 ntụgharị. Iji etinye ego nke a:
Dịka ị pụrụ ịhụ, na nke a, a na - eme ka voltaji okpukpu abụọ ...
Kedu ihe na-agbanwe toroidal?
Ihe niile e kwuru maka ot transformer-emetụta ndị toroidal onye na-agbanwe, ọ bụ ezie na nke a nwere ụfọdụ atụmatụ dị iche iche, yana ụfọdụ uru. Mana ụkpụrụ ọrụ yana ịgbakọ nwere ike inyere gị aka ịghọta etu o si arụ ọrụ.
Na geometry, iyi bụ oke mgbanwe nke polygon na-eme ma ọ bụ usoro ụgbọelu emechiri emechi nke na-agagharị na mpempe mpịakọta nke coplanar nke ọ na-anaghị agabiga. Nke ahụ bụ, n’okwu ndị dị mfe, ọ bụ ụdị mgbaaka, donut, ma ọ bụ hula hoop.
A toroidal transformer emesi a ala leakage agbanwe, nakwa dị ka ọnwụ ruru ka obere eddy okwukwo karịa na mgbatị ọkụ. Ya mere, ha ga-ekpo ọkụ dị ala ma bụrụ ndị na-arụ ọrụ nke ọma, yana ịbụ ndị na-eme ka ọ dịkwuo nkenke n'ihi ọdịdị ha.
Dị ka mgbanwo ọkụ, ha nwekwara ike inwe ihe karịrị windings abụọ, nke ga - ebute otu ihe ntinye ntinye, na otutu ihe ntinye, nke obula nwere ike igbanwe na volta ozo. Iji maa atụ, chee na enwere abụọ, otu nke na-esite na 220v ruo 110v na nke na-aga site na 220v ruo 60v, nke bara oke uru maka ike ikike ndị ahụ ebe achọrọ volt dị iche iche.
N'okwu a, kama ịmịpụta ndọta N’ime igwe nwere ụdị square ahụ, a na-eme okirikiri ụyọkọ na torus. N'èzí ya ka ubi ahụ ga-abụ efu, ike nke mpaghara a ga-adaberekwa na ọnụ ọgụgụ ntụgharị.
Ihe ọzọ dị iche iche bụ n'ọhịa ahụ ọ bụghị otu, kachasị ike n'ime mgbanaka ahụ na ike na-adịghị ike n'èzí. Nke ahụ pụtara na ubi ahụ ga-ebelata ka radius na-eto.
Mmekọrịta nke ike ndenye na mbubata na agbanwe site na nha na ọnọdụ ọrụ ya, mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-adịkarị elu karịa nke ndị na-agbanwe ọkụ. Ọzọkwa, ebe ọ bụ na mfu resistive nke onye na-agbanwe ọkụ na-abịa site na waya ọla kọpa nke eriri igwe na ọnwụ nke isi ahụ, ebe ọ bụ na toroid nwere obere mfu, ọ ga-arụ ọrụ nke ọma dịka m kwuchara na mbụ.
na ngwa ma ọ bụ ojiji ha yiri ndị nke ot mgbanwe. A na-ejikarị onye na-agbanwe ihe na-agbanwe agbanwe na mpaghara nke nkwukọrịta, ngwá egwú, ngwaọrụ ahụike, nkwupụta ụda, wdg.
Dị ka ọ na-adị mgbe niile, onye na-agbanwe toroid nwere uru ya, mana enwekwara ụfọdụ ndọghachi azụ. N'etiti na uru kwụpụta:
Ha na-arụ ọrụ nke ọma.
Maka otu ihe ahụ dị ka ihe na-eme mgbe niile, toroid ga-achọ obere ntụgharị, ya mere ọ dị nkenke.
Site na ime ka magnetik ahụ dị n'ime, enwere ike itinye ha n'akụkụ ihe ndị ọzọ dị na kọmputa na-enweghị nnyonye anya site na nrụpụta achọghị.
N'etiti adịghị ike Ha bụ:
Ha dị mgbagwoju anya na ifufe karịa ndị nkịtị.
Ọ dịkwa ike ịnwe ụda.
Ebee ka ịzụta ihe ntụgharị nke toroidal
Nwere ike ịchọta ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla ụlọ ahịa kọmputa ọkachamara, ma ọ bụ ị nwekwara ike ịnweta otu site na Amazon. Iji maa atụ, lee ụfọdụ aro:
Otutu transformer 220v ka 24v.
DollaTek 220v ruo 24v (abụọ 12v, 12v)
Sedlbauer si 230v ruo 24V (abụọ 12v + 12v).
Tector si 230v ka 12v
Dịka ị hụworo, ha dị iche VA, 100VA, 300VA, wdg. Uru a na-ezo aka na oke nnabata kacha mma. A tụrụ ya na volts kwa ampere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Toroidal transformer: ihe niile ịchọrọ ịma
Lithophany: ihe ọ bụ na otu esi eme ya na mbipụta 3D
Pesdị sekit eletriki dị ugbu a